समाज Archives - Page 218 of 228 - Dna Nepal
लिफ्ट चढेर सरर विन्ध्यवासिनी मन्दिर, निर्माण सम्झौता सकियो ५ पुष २०७४, बुधबार १७:२४
धन बस्नेत पोखरा, पुस ५ । योजना एकदशक अघि मात्रै बनेको थियो । विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा लिफ्ट हाल्ने योजना लक्ष्मी ग्रुपले बनाएको थियो । जुन योजना लक्ष्मी ग्रुपका संस्थापक बुद्धिबहादुर श्रेष्ठले परिकल्पना गरेका थिए । त्यो परिकल्पना एकदशकपछि..
यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! ४ पुष २०७४, मंगलवार १०:५८
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे ! अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ! इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr !..
नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो। (विज्ञापन सहित)
काठमाडौं, पुस ४। नेपाली सेनाले अधिकृत क्याडेट पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनोट निर्देशानालय, कार्यरथी विभागले आज एक विज्ञापन आह्वान गर्दै अधिकृत क्याडेट पदमा १५० जना माग गरेको हो । जसअनुसार आदीबासी तथा जनजाती २२, महिला १३,..
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विवाद मिल्यो १ पुष २०७४, शनिबार १४:३२
पोखरा, पुस १ । कार्यालय ब्यवस्थापनमा विवाद उत्पन्न भएपछि बन्द रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका शनिवारदेखि खुलेको छ । वडाअध्यक्ष र सरोकारवालबीच छलफल गरेर आइतबारदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको हो । शनिवारको बैठकमा पूरानै ठाउँबाट कार्यालय..
बचत तथा ऋण सहकारी संघको साधारणसभा
पोखरा, पुस १ । कास्की बचत तथा ऋण सहकारी संघको १७ औं वार्षिक साधारणसभा शनिबार सकिएको छ । साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक प्रभा कोइरालाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहकारी अभियानको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताइन्..
नयनतारा कृषि सहकारी संस्थाकोे वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न
पोखरा, पुस १। नयनतारा कृषि सहकारी संस्था लि पोखरा लेखनाथ ८ को नयनतारा कृषि सहकारी संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन शनिवार सम्पन्न भएको छ।अधिवेशनले नयाँकार्य समिति अध्यक्ष पदमा नृपेश अधिकारी,उपाध्यक्ष अमृतकुमार बराल,सचिव..
प्रचण्डले किन छाडे लाजिम्पाट ? (यस्ता छन् कारण)
काठमाडौं, पुस १ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड नयाँ घर सरेका छन् । सुरुदेखि नै पार्टी्भित्र र बाहिर निकै विवादित बनेको लाजिम्पाटस्थित निवास छोडेका हुन् । नयाँ बजारबाट लाजिमपाटी सरेदेखि नै पार्टी बैठकदेखि प्रशिक्षणमा..
गाउँपालिका कार्यालय सारेपछि अन्नपूर्णमा विवाद २८ मंसिर २०७४, बिहीबार १४:२६
प्रकाश ढकाल पोखरा, मंसिर २८ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कार्यालय सारेपछि विवाद सुरु भएको छ । गाउँपरिषद्मा छलफल भएर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर कार्यालय सरेपनि केही वडाध्यक्षहरुले विवाद सिर्जना गरेका हुन् । यसअघि लुम्ले कृषि केन्द्रको..
मकवानपुरमा ५६ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत
हेटौडा, मंसिर २८ । मकवानपुरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि गरी स्वतन्त्र र १७ राजनीतिक दलकासहित ६८ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा ५६ जना उम्मेदवारको मात्र धरौटी जफत भएको छ । निर्वाचनमा खसेको सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत..